Jonathan Onyekachi Nwanne
Tọzdee, Machị 24, 2011 Na Mọnde, Nọmba 29, 2011 Douglas Karr
N'afọ gara aga, edere m akwụkwọ na nzaghachi Jonathan Salem Baskin, wezuga echiche ya na Social Media nwere ike ịdị ize ndụ maka ụlọ ọrụ. (Ekwenyere m ya na ya otutu). Oge a - na uche m - Maazị Baskin kpọgidere ya. Companylọ ọrụ ọ bụla na-awụli elu na mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-emewanye ahịa na-emefu ebe ahụ, mana ole na ole na-ahụ nloghachi ha tụrụ anya ya. Burger King emechaala
Fraịdee, Nọvemba 26, 2010 Satọde, Satọdee 26, 2015 Douglas Karr
Anọ m na-eche banyere ịkpọ aha a post, Why Jonathan Salem Baskin is Wrong… but I really agree with him on many points in his post, The Dan Hazard Lure of the Social Web. Ekwenyere m, dịka ọmụmaatụ, na ndị na-elekọta mmadụ na-ejikarị ịmanye ụlọ ọrụ itinye aka na mgbasa ozi na-enweghị nghọta zuru oke banyere ọdịbendị ma ọ bụ akụ na ụlọ ọrụ ha na-arụ ọrụ. Otú ọ dị, o kwesịghị ịbụ ihe ijuanya. Ha na-agbali ire ngwaahịa… ha
Kedu ihe na-agafe gị?
Wednesday, October 24, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nyaahụ ka mụ na ezigbo enyi m, bụ́ Bill, na-eri nri ehihie. Ka anyị riri ofe tortilla anyị mara mma na Scotty's Brewhouse, mụ na Bill tụlere oge ahụ na-adịghị mma ebe ọdịda adịghị agbanwe gaa nke ọma. Echere m na ndị nwere ọgụgụ isi n'ezie nwere ike iji anya nke uche hụ ihe egwu na ụgwọ ọrụ ma mee ihe kwekọrọ na ya. Ha na-awụli elu na ohere, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ihe egwu adịghị agabiga ... ọ na - edugakarị na ihe ịga nke ọma ha. Ọ bụrụ na atụfuo m, nọgidenụ m. Lee ihe